माननीयकाे हाँस्यास्पद प्रस्ताब : प्रदेश राजधानी १ बर्ष रुपन्देही,अर्काे बर्ष बर्दियाको राजापुर !-Nagarikaawaj.com
माननीयकाे हाँस्यास्पद प्रस्ताब : प्रदेश राजधानी १ बर्ष रुपन्देही,अर्काे बर्ष बर्दियाको राजापुर !
प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसदको प्रश्न ः ‘ नाम र राजधानी तोक्न कस्ले रोक्यो,किन डराएको ?
कपिल ज्ञवाली/२५ असार ,बुटवल ।
प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नाम, राजधानी, महिला हिंसासंगै प्राकृतिक बिपत्तीका बिषयहरु उठेका छन् । संसदको दोश्रँे अधिबेशन अन्तर्गत १९ औं बैठकको शुन्य समयमा १८ जना सांसदले भाग लिएका थिए ।
दैबिप्रकोपको पीडामा जनतामाझ पुगेर आफ्नो अस्थित्व देखाउनुपर्दैन सरकार ?
सरकारले प्राकृतिक बिपदका बेला पनि कुनै काम गर्न नसकेको सत्तापक्षकै सांसदहरुको गुनासो छ । ‘सरकार के गर्दै छ,कहा छ,दैबिप्रकोपको पीडामा जनतामाझ पुगेर आफ्नो अस्थित्व देखाउनुपर्दैन ’ सत्तापक्षकै सांसद रामजी घिमिरेले भने ।
रुपन्देहीको कंचन गांउपालिकामा भएको युवती मट्टीतेल छर्किएर आगो लगाएर हत्या भएको प्रकरणले समेत संसदमा प्रबेश पाएको थियो । कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले प्रहरीले किटानी जाहेरी पनि लिन नमानेको र निर्ममतापुर्वक किशोरीको हत्या गरिएकोमा छानबिन गर्न सरकारसंग माग गरिन् ।
‘प्रशासनको मुखैमा यस्ता घटना भएका छन्,त्यहाका जनप्रतिनिधि गैर जिम्मेबार देखिएका छन्,प्रहरी प्रशासनले पनि यस्लाइ बेबास्ता गरेको पाइयो,सरकारको ध्यान जाओस् उनले भनीन् ।
५ नम्बर प्रदेश सुकुम्बासी जस्तै !
अर्का सांसद भुमेश्वर चौधरीले ५ नम्बर प्रदेश सुकुम्बासी जस्तै भएको टीप्पणी गरे । ‘न नाम न त राजधानी छ, १ बर्ष रुपन्देहीमा राखौं ,अर्काेबर्ष बर्दियाको राजापुरमा राजधानी राख्नुपर्छ’ उनले भने ।
सामुदायिक बिद्यालय मर्ज गर्नुपर्छ :
सांसद बिष्णु पन्थीले सामुदायिक बिद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने भन्दै थोरै बिद्यार्थी भएका बिदालय चलाएर अर्थ नभएको बताए । धर्मबहादुर लाल श्रीबास्तबले अबधि भाषामा संसदमा सम्बोधन गर्दै ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी कपिलबस्तुको तिलौराकोटमा राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रदेशको नाम र राजधानी राख्न के को डर छ ?
अर्का सांसद अष्टभुजा पाठकले सरकारलाइ प्रदेशको नाम र राजधानी राख्न के को डर छ,संसदमा जवाफ दिन आग्रह गरे ।
‘छिमेकी प्रदेशहरु नामाकरण भैसके,स्थायी राजधानी तोकिसकियो,यहा कस्ले रोक्यो,किन तोेकिएन ’उनको प्रश्न छ ।
प्रदेशसभा बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरु फकरुद्धिन खां,दामाकुमारी शर्मा,थानकुमारी थापा,कृष्ण न्यौपाने,सन्तोष पाण्डे,कमला बिक,रेबती रमण शर्मा,दीपा बिक,सरस्वती गौतम,बिजय यादब लगायतले धारणा राखेका थिए ।
केसीले दुइवटा विधेयक टेवल गरे
आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुल प्रसाद केसीले दुइवटा विधेयक टेवल गरेका छन् ।
मुख्य न्यायधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएको छ ।
अर्काे बैठक असार २६ गते दिउसो १ बजे बस्ने सभामुख पूणर््ा बहादुर घर्तीले बताए ।